3 fikradaha laga helo Xiaomi Smart Home iyo inbadan! ZigBee, Bluetooth iyo WiFi - SmartMe
Casharrada, Hoyga Xiaomi
3 aragtiyood oo ka socda Guriga Xiaomi iyo waxyaabo kaloo badan! ZigBee, Bluetooth iyo WiFi
19 Janaayo 2021
Waxa daabacay	 Ariel
Aqar, Bluetooth, wifi, xiaomi, xiaomi guriga, Zigbee
Qof kastaa wuxuu yeelan karaa Guri Casri ah. Tani waa fikradda ka dambeysa SmartMe waana ku dhegi doonnaa. Si kastaba ha noqotee, qof kastaa wuxuu bilaabmaa mararka qaarkood wuxuuna ubaahan yahay inuu ogaado waxa Zigbee yahay, sababta Wifi muhiim ugu yahay aaladaha waxayna ku saabsan tahay dhammaan albaabadan Bluetooth. Tilmaamahan, waxaad ku baran doontaa waxa saddexda fikradood ee aasaasiga ah ee adduunka Xiaomi Home macnaheedu yahay.
Maqaalkan waxaa la qoray dhowr bilood ka hor, laakiin waxaan si adag u go'aansanay cusbooneysii. Wadnaha nidaamka deegaanka ee Xiaomi waa codsiga Mi Home. Tani waa halka aad ku darto aalado badan oo aad ku dhisto gurigaaga caqliga leh asalkiisa. Waxa muhiimka ah ee had iyo jeer maskaxda lagu hayo waa arrinta gobolka. Waxaad ka iibsan kartaa aaladaha iyo dareemayaasha dhaqdhaqaaqa gobolka Shiinaha ama gobolka Yurub. Iyadoo aan la helin wax la beddelay ama la duubay, ma ku dari doontid dhammaantood hal codsi aqal smart. Marka waxaad u baahan tahay inaad si wanaagsan u dejiso gobolka. Hore ayaan uga qornay tan guide.
Macluumaad kooban oo muhiim ah oo ku saabsan alaabada Xiaomi Home
Markaan helno codsi si habeysan loo qabtay oo aan uga saarno aaladda sanduuqa, waxaan dooneynaa inaan ka dhigno mid shaqeynaya. Dhamaan alaabooyinka oo dhan waa inay bixiyaan guri caqli leh oo si fudud ayagoo adeegsanaya dareemayaal diraya macluumaadka. Iyo si aad u dejiso qalabkaaga oo aad u faraxdo, waxaa mudan in la ogaado qaybaha ay ku dhacaan.
Qalabkani ma ogola in wax muuqaal ah la dhiso. Intaa waxaa sii dheer, waxaan la xiriiri karnaa kaliya markaan ka agdhaw nahay. Tusaalaha aaladda noocan oo kale ah waa tusaale ahaan qalabka 'Xiaomi'.
Iridda Bluetooth - albaabkani wuxuu noo oggolaanayaa inaan si fog u xakameyno aaladaha Bluetooth-ka. Sidaa darteed, waxay si weyn u kordhineysaa fursadaha la heli karo oo qayb ka ah guriga caqliga badan. Tusaalooyinka himilooyinkaas oo kale ah Philips LED lamp - Xiaomi, taas oo ah mid ka mid ah aalado badan oo waxtar leh oo aad ugu mahadcelin karto otomaatiga maalinlaha ah, howlaha soo noqnoqda.
BLE - Tamar yar oo Bluetooth ah. Kani waa tikniyoolajiyad cusub oo loo yaqaan 'Bluetooth' oo cunaysa tamar aad u yar. Waad ku mahadsan tahay, aaladaha Bluetooth-ka wax badan ayey ku sii socon karaan hal batteri.
Qalabka ugu caansan. Qalabku wuxuu ku dhegan yahay router-ka sidaas awgeedna waxaan ka heli karnaa meel kasta. Xusuusnow in carqalad kasta, tusaale ahaan darbiyada, ay carqaladeyn doonaan signalka. Qalabka markaa waa inuu lahaadaa marin wanaagsan routerkaas oo u oggolaanaya wareejinta xogta wireless.
Haddii baaxaddaadu ay daciif tahay, waxaa habboon in laga fiirsado kordhiye signaalyaa kuu dheereynaya
Zigbee waxay u oggolaaneysaa isgaarsiinta qiimo aad u hooseeya oo tamar ah. Aaladuhu waxay u shaqeeyaan laba nooc: baytariga oo ku shaqeeya oo si toos ah ugu xidhan godka. Aaladaha batteriga keli ah waa inay socdaan ugu yaraan labo sano tanina waa shuruud lagu helo shahaadada ZigBee.
Qalabku wuxuu u baahan yahay albaab lagala xiriiro dunida dibedda. Tan awgeed, qayb muhiim ah oo ka mid ah isgaarsiintu culeys kuma saarin shabakadeena. Dhammaan isgaarsiinta waa la xaqiijiyaa maxaa yeelay aaladda waa inay marka hore ku lammaan tahay albaabka.
Qalabka Zigbee wuxuu ku shaqeyn karaa masaafo dheer. Qalab kasta oo ku xirmay godka wuxuu u shaqeeyaa sida qalabka wax lagu kordhiyo. Waxaan xitaa abuuri karnaa xariiq 5 qalab ah oo si weyn kor ugu qaadi doona calaamadda.
Faa'iidada ZigBee sidoo kale waa isla markiiba helitaanka xogta. Waxba kama daahno halkan. Sababtaas awgeed, waxaa jira, kuwo kale si xamaasad leh loogu adeegsado dareemayaasha dhaqdhaqaaqa, halkaasoo waqtigu si gaar ah muhiim ugu yahay.
Saddex nooc oo qalab ah
Qalabka Zigbee wuxuu ku dhacaa saddex nooc oo qalab ah:
iridda Hawsheedu waa isku dubaridka shaqada aaladaha kale. Waa waxa aaladaha kale ku xirmaan waxayna aruurisaa macluumaadka. Albaabbada badanaa waxay leeyihiin xaddidaadyo tirada aaladaha lagu dhejin karo iyaga - 16, 32 ama xitaa aaladaha 64!
Cod-weyneyaha waa aaladda ZigBee ee aad ku xirtid godka. Xusuusnow, si kastaba ha noqotee, inay ahaato la socoshada N! Waxay noqon kartaa laambad, meel laga baxo, ama meel lagu beddelo darbiga. Calaamadda waxaa lagu kordhin karaa ugu badnaan 5 aalad, marka haddii aan heysano qalab kama dambeys ah, tusaale ahaan 20 mitir albaabka, albaabka laftiisa ma ogaan doono. Laakiin mahad-celiyeyaasha, way ku gaari kartaa.
Qalabka ugu dambeeya waa batari ku shaqeeya. Badanaa kuwani waa dareemayaal. Gadiidka, daadad biyo ah, qiiqa, shidashada cawsduurku. Dhammaan aaladahaani waxay toos ugu xirmaan irridda waxayna siiyaan macluumaad ku saabsan xaaladdooda iyo waxa ay cabirayaan xilligan. Qalabyadu waxay seexdaan si ay u keydiyaan awoodda, laakiin waxay ku toosaan millisekonds.
Xiaomi kaliya maahan Xiaomi
Xiaomi maahan shirkada kaliya ee soo saarta dhamaan alaabteeda. Tani waa mowduuc gelitaan ka duwan, laakiin waxaa habboon in la ogaado in Xiaomi ay ka iibiso qalabka ka soo saarayaasha kala duwan. Waxa ay wadaagaan waa isdhexgalka arjiga Mi Home. Tan awgeed, waad ku xidhi kartaa aaladaha, iyo kuwa kale ka yimid Roborock, Yeelight, Smartmi, Viomi, Aqara iyo dhowr shirkadood oo kale. Waxaan ku diyaarinnay liis buuxa oo iyaga ka mid ah oo taxane maqaallo kala duwan ah - Qeybta 1, Qeybta 2.
Apple HomeKit, Kaaliyaha Hoyga, dib u eegista, Hoyga Xiaomi
Aqara Magic Cube - Xiaomi cube review
Aqar, Aqara sixir cube, xiaomi
Miyir-qabad yar oo khafiif ah ma noqon karaa cunsur muhiim u ah Smart Home? Thanks to Aqara Magic Cube, waxaan ogaaday haa. Laakiin iska jir! Waa inaad leedahay fikrad gaar ah taas. Akhri dib u eegida Aqara Magic Cube. Aqara Magic Cube waa ...
Dabcan waxaa jira dhowr soosaarayaal kale oo alaabada ay Xiaomi iibiso laakiin aan is dhexgelin oo ay leeyihiin codsiyadooda. Tani waxay ku dhacday kaamirooyinka Yi ee aadan ku xirnaan doonin Mi Home.
Macluumaadkaan, waxaad durba leedahay aqoon aasaasi ah oo ku saabsan nooca aaladaha guryaha casriga ah. Hadda ma jiraan wax kale oo la isku dayo! Smart Home waa heshiis runtii aad u weyn isla markaana waxaan si weyn ugula talineynaa qof walba.
Xiaomi Home - guri caqli badan ayaa ah gurigaaga
Fikradda guri caqli gal ah ayaa ah in la waafajiyo meesha bannaan ee la doortay iyo baahida shaqsiyadeed ee adeegsadayaasha. Marka la soo koobo, Xiaomi Smart Home waa gole iskuxiran, xalal isku dubbaridan oo ugu horreyn loogu talagalay fududeynta adiga iyo kuwa aad jeceshahay ama martidaada.
Adigoo maal gashanaya aaladaha ku xiga, adoo dejinaya howlahooda heerka codsiga, adoo dhisaya nidaamkaaga gaarka ah, waxaad bilaabeysaa inaad aragto sida ay muhiim u tahay shaqsiyaddu. Kuwani waxbadan maahan, lagaba yaabee, aalado soo rogo qaab loo adeegsado, ayagoo aan u ogolaaneynin inay ka gudbaan nidaamka shaqada. Ka soo horjeedda - oo ku saleysan macluumaadka la galiyay, dareeraha ama aaladda kale ee Xiaomi Smart waxay u shaqeysaa sida aad rabto, dabcan, gudaha xulashooyinka la heli karo.
Iyada oo la kaashanayo alaabada sida Smart Motion Sensor (ama tiro ka mid ah dareemayaasha kale) waxaad ku bilaaabin kartaa si aalad la’aan ah isla markaana si otomaatig ah u kordhin kartaa heerka amniga. Waxaad dareemeysaa raaxo ah in aalado badan ay si dhaqso leh u shaqeeyaan oo aan ka qeybqaadashadaada ahayn Thanks to codsiga ku habboon, waxaad dejisay dhammaan macluumaadka iyo howlaha aad u baahan tahay oo aad xiiseyneyso, inta soo hartayna waa arrin ku saabsan hawlgalka qalabka. Dareemaha dhaqdhaqaaqa ee loo yaqaan "Smart Sensor Set" dareemayaasha dhaqdhaqaaqa waxay furayaan liis daraasiin xalal ah oo ay saxeexeen astaanta Xiaomi ama iskaashi la yeelanaya nidaamka 'Xiaomi Smart Home'.
Smart Home qof walba - 13 waxyaalood oo otomatik ah
23 Febraayo 2021
guri caqli badan, guriga smart
Markaan qorsheyneyno aqalkeena caqliga badan, waxa ugu muhiimsan waa inaan qeexno baahiyaheena. Waxaan markaa isweydiineynaa su'aal aasaasi ah - maxaan iskaga kaashan karnaa tikniyoolajiyadda noocan ah? Waxaan ka bilaabi karnaa adeegsiga aaladaha hal soo saare, markaa way fududahay ...
Maqaalka, waxaad ku baran doontaa saddexda fikradood ee aasaasiga ah kuwaas oo aasaaska u ah guri caqli badan, sidaa darteed "bluetooth", "wi-fi" iyo "zigbee". Waa nooc ka mid ah casuumada adduunka taas oo tikniyoolajiyaddu u kordhineyso raaxada noloshaada, waxay kuu oggolaaneysaa inaad keydiso tamarta iyo waqtiga qaaliga ah, taageerno ilaalinta hantida iyo dareenka guud ee amniga. Iyo waxa ugu fiican - ma jiraan liisaska qiimaha oo adag, xulashooyinka kaliya ee saxda ah, xiriirro adag.
Markasta oo nidaamka la furo, ayaa ka sii fiican. Adigoo ku daraya aaladaha iyo rakibida alaabooyin badan, waxaad arkeysaa faa iidooyin badan oo aad u leedahay guri caqli badan. Sababtoo ah guriga caqliga ahi waa guri caqli badan, taas oo ah sida aad u barnaamij u sameyso, u otomatigyeeyo, u hagaajiso.
Gebi ahaanba waalan oo ku saabsan caqliga. Haddii wax cusub u muuqdaan, waa in lagu wareejiyo oo la tijaabiyo. Wuxuu jecel yahay xalalka shaqeeya mana istaagi karo aalado aan faa'iido lahayn. Riyadiisa ayaa ah inay dhisto xariifka ugu wanaagsan ee ugu wanaagsan Poland (iyo mar dambe adduunka iyo Mars 2025).
Kooxda Polish-ka ee 'Smart Home' ee 'Smart Home'
Kooxda Polish ee Xiaomi waxaa soo saaray SmartMe
News, Home smart
Mashruuca CHIP ayaa magaciisa u beddelay Matter
chip, arrinta, Zigbee
Guriga ku xiran Mashruuca IP-ga ayaa badalaya magaciisana waxaa loo gudbin doonaa arinka wixii hada ka dambeeya. Soosaarayaasha ugu waaweyn ee ka socda shabakada internetka ee sida weyn loo fahmay ee warshadaha waxeey ku lug leeyihiin horumarinteeda. Shirkadaha iskaashanaya gudahood si gaar ah loo abuuray ...
7 fikradood oo ku saabsan "3 aragtiyood oo ka socda Guriga Xiaomi iyo waxyaabo kaloo badan! ZigBee, Bluetooth iyo WiFi"
Pingback: Nalalka Philips Hue waxay noqon karaan bartilmaameedka weerarka wax jabsada - SmartMe
Pingback: Furitaanka Mi Store ee Częstochowa iyo sannad-guuradii Mi Store ee Gdynia. Qiime usbuuc dhammaadka! - SmartMe
Pingback: Aqara socket si rasmi ah Yurub - SmartMe
Pingback: Buundada Sonoff ZigBee hadda waa la heli karaa! - SmartMe
Pingback: # Noqo guri beddelasho # Noqo guri! - SmartMe
Xaqiiq ah ayuu qoray wargayska:
14 Janaayo 2021 at 22: 32
Micno malahan in la iibsado tusaale ahaan ZIGBEE 3.0 ETHERNET TUYA GATE CENTRALKA oo ka iibso badeecadaha soo saarayaasha kala duwan oo leh heerka ZigBee?
Ma xalka ugu furan suuqa?
Daraasiin shirkado ah ayaa soo saaraya alaab heerkaan ah.
Wuxuu qorsheynayaa guri caqli badan, laakiin xalka badan ayaa naxdin leh.
Wax talo bixin ah?
SmartMe ayuu qoray wargayska:
16 Janaayo 2021 at 12: 05
Waxaad isku daraysaa Tuya iyo Tuya, mahelaysid dhamaan soosaarayaasha. Fiiri qodobkan - https://smartme.pl/zigbee-o-co-w-tym-chodzi-i-ktora-bramke-wybrac/. Waad furi kartaa iyaga, laakiin waxay la xiriirtaa xiiso badan.
cinwaanka email Your aan laga soo saari doonaa. Fields in waa in la buuxiyaa waxaa lagu calaamadeeyay * *
Xusuusnow xogteyda shabakada markii aad qoraysid faallooyinka soo socda.